Muchidimbu European By Train In 3 Weeks | Save A Train
musha > Travel Europe > Muchidimbu European By Train In 3 Weeks
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
(Last Updated On: 19/08/2020)
A quintessential rwendo kufamba kuti akaenderei Europe nechitima. Zvinonzi zvakasimba kuva nzvimbo eco ushamwari kufamba nzira. famba, Chaizvoizvo, kwete chete Unowedzera horizons edu asi Unowedzera maonero edu. Funga St. Augustine iwane mashoko, "Nyika iri bhuku uye vaya vasingadaro pakufamba, verenga peji imwe chete ".
In ichi Tech-savvy, digital age connection is fast and furious. With zvose kunobatsirei, tinorasikirwa chokuita kukosha chikamu vanofambira uye upenyu, aripo nguva. Train Nzendo kuburikidza Europe kurudzira, vanogona uye kudanana.
Nokuti vaya vasingadi kurarama munyika umo chitima kufamba kuri akakurumbira, inogona inoshamisa ushingi. Chimwe perk guru European chitima kufamba ndechokuti, kusiyana dzendege, European chitima dzemapurisa dziri pakati chaipo Maguta. It anocheka kufanira mari yedu dzakarukwa zvakanaka zvirire zvemari okufambisa.
Nokusarudza chitima kuburikidza Europe, tiri kusarudza nzira kufamba kuti kuchaita kuita isu asi unotipa kuona zvikuru kupfuura isu kazhinji wakaramba. Mumwe hwokutiparadza kwakadaro dzakazonaka huru gumi inotaura European uye zvinoitwa pamusoro 3 mavhiki. Verenga kuti uzive kuti kufamba European Highlights By Train In 3 Weeks.
Muchidimbu European By Train Day 1: Vienna, Ositiriya
The chitima kuburikidza muEurope rwendo kunotanga muVienna, guta guru Austria. Mazuva maviri runobwinya ushingi Mirira. Baroque streetscapes uye Imperial dzoushe kuisa matauriro kuti showcase zvinoyevedza, mapurani, tsika uye nziyo ounyanzvi. Izvi pamwe yaro wakagodora kofi-imba tsika uye vakagwinya magadzirirwo zvatinoona.
mumok kunokosha-kuita kana muVienna. It inozivikanwa chains-garde uye dzimwe nguva zvinotyisa zvisikwa zvinoyevedza, izvo zvinosanganisira mabasa kubudikidza Pablo Picasso uye Andy Warhol. The muunganidzwa zvawo chinosanganisira zvinenge 10,000 unyanzvi zvinofadza.
Zuva 2: Salzburg, Ositiriya
chitima Your kuburikidza Europe mberi, kushandisa zuva Salzburg guta Austria raMwari. Zviri pamuganhu Germany uye ane zvinoshamisa maonero of Eastern Alps. Salzburg zvokuti mukurumbira kuva nyaya-bhuku mutaundi raiva kamwe kumba munyori mukuru wenyika, Mozart.
Zvikomo vari vapenyu Salzburg. Zvakanga kamwe kushandiswa sezvo filming nzvimbo nokuda zvikuru acclaimed, 'Sound of Music' uye kune palpable pfungwa unyanzvi kusikwa. Zvinoitawo exudes yakanyarara rwune.
Munich kuna Salzburg Zvitima
Graz kuna Salzburg Zvitima
Linz kuna Salzburg Zvitima
European Highlights Days 3: Munich, Jerimani
Rakatevera maviri kwamira muchitima kuburikidza Europe vane Munich uye Stuttgart muGermany. Zvingava zvakanaka kushandisa zuva neimwe mukurumbira dzakasiyana idzi.
Munich uye nhaka yaro Bavarian vari apo doro uye doro tsika akaumba chinhu chinokosha mutsika dzavo, kwemazana emakore vanenge nomwe. The Oktoberfest riri pamusoro pamazita muMunich. It rinopembererwa nemamiriyoni evanhu kuti kushanya kubva pasi pose, kudya vari Kupemberera.
Zuva 4: Stuttgart, Jerimani
Stuttgart ane yakashongedzwa aone, apo motokari uye chinoshamisira restaurants tichitsanya pave ambiance upenyu ano asi pane zvakawanda Stuttgart chete ano. Stuttgart ane waini emabhawa uye muchipfuva-nati shaded doro mapindu dzinoratidza wakaisa-musana, kukava tsoka dzenyu zvachose.
Munich kuna Stuttgart Zvitima
MuFrankfurt kuna Stuttgart
Heidelberg kuna Stuttgart Zvitima
European Highlights Days 5: Strasbourg, Furanzi
Hopping shure muchitima, zviri kure kuFrance! Kupedza zuva muStrasbourg.
Strasbourg haaiti pakati Ages kare uye kunoramba ramangwana. Its Gothic Cathedral chiri mapurani hazvishamisi and roaming through the old town’s twisting alleys and enjoying tavern food comes highly recommended.
Dijon kuna muStrasbourg Zvitima
Days 6 – 8: Paris, Furanzi
Paris inoda shoma sumo wayo iconic mapurani kusanganisira Eiffel Tower, ari Arc de Triomphe, uye Notre Dame Cathedral. Shoko Parisian kwakafanana manyorerwo uye nokuda kwechikonzero chakanaka. tarisira nyika-kirasi chili, kunotenga, namaberere zvinova kumbobvira-kupedza kunobva rakafuridzirwa uye mufaro. The yakanakisisa chitima nzendo mu Europe acharamba zvinosanganisira guta rino mukurumbira.
European Highlights Days 9 & 10: kweBrussels, Bherujiyamu
Kamwe Paris akaita wooed pamwe dzorudo, shandisa mazuva maviri anotevera muna kweBrussels, pamberi inotevera chitima gumbo. Mazuva maviri kweBrussels panofanira ounyanzvi deco pamadziro uye kushanyira Grand Palace pachivara. Iri raiva mumwoyo peguta, apo 17fung Muzana remakore rapfuura anouya upenyu.
Days 11 – 13: Amsterdam, The Netherlands
Amsterdam ndiko kuti rwendo pamwe migero zvenhau, iyo hakuzivani, uye kufamba kuburikidza mamiziyamu uye yokukohwa-akazara zvitoro. kunwa, yokudyira uye magadzirirwo zvinoitika muzvakaratidzwa zviya uye fadza. Amsterdam iguta kushamiswa uye ndiko kumusha Van Gogh miziyamu uyewo boka zvimwe pfuma vanoonekwa.
European Highlights Days 14 – 17: Valenza & Berlin, Jerimani
musana Head kuGermany uye vanopedza mazuva mashanu muchitima kuburikidza Europe muna Valenza, Berlin, uye Dresde. Rimwe zuva Valenza (mumufananidzo uri pazasi), kushanyira mamiziyamu dzayo zhinji namaberere dzakadai Valenza Overseas Museum. Chinhu guta chengarava, Bremerhaven ndiko kunakirwa uko matsva zvomugungwa uye kuziva zvinonakidza chiteshi nhoroondo.
Berlin uchada mazuva matatu kunyudza. Berlin ane mukurumbira ari 'guta kuti haana anorara'. Tora mukana wayo vibrancy! Usiku dziri mafaro uye mazuva dziri tsika nokunamata.
Zuva 18: Dresde, Jerimani
KuDresden inoda chete pazuva, kushamiswa sezvo yayo Grand Musigg yaro Versailles-akafuridzirwa Zwinger wamambo dzimba mamiziyamu. Guta yakatangwa 1743 uye aitofanira raizovakwazve pashure World War 2. Zvakanzi pakunzi 'Florence of Elbe’ nemhaka yaro rine runyararo nzvimbo.
Berlin kuna Dresde Zvitima
Potsdam kuna Dresde Zvitima
MuNuremberg kuna Dresde Zvitima
European Highlights Days 19 – 21: Prague, Czech Republic
The nechitima rwendo muEurope kunoguma muPrague, pashure dutu remhepo chishamiso. Prague ndiro guta spiers uye rinowanzoshandiswa zvichienzaniswa kunaka Paris. It zvakare se ari kumba doro zvakanakisisa kuEurope. Nakidzwa chiseko ane 14fung remakore ibwe zambuko, pechikomo memauto uye rwizi simbe. Ndiyo nzira akakwana kugumisa chitima rwendo kuburikidza Europe.
The yakanakisisa chitima nzendo mu Europe achava nechokwadi muri wakasununguka uye akazorora. Pakunzwisisa girl munzira, kuchengeteka achifamba nechitima uye kudzvinya sezvo zvinotyisa vakawanda sevanobvira. Hapana nani nzira yokufamba. Book pamwe Save A Train nhasi!
Unoda embed yedu Blog romukova “Muchidimbu European By Train In 3 Weeks” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/european-highlights-by-train/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / ngaabve kuti / von kana / kes uye mimwe mitauro.